ME Resource Pick-Up & Drop-Off – Mason City sekoly COVID-19 foibe
Mason El-Métération d'Antsiranana & Drop-Off
Azafady tadiavo ny efitrano fianaran'ny zanakao ao amin'ny fandaharam-potoana etsy ambany hahafantarana ny daty sy fotoana hikolokoloana sy hanetezana ny fitaovan'ny efitranon'ny zanakao.
Mialoha ny tonga any amin'ny ME
Angony ny boky sy ny fitaovana fampianarana hafa izay ananan'ny sekoly na ny mpiasa. 3Ny mpianatra manana kilasy rd dia hitazona ny kitapo famakiany, ny mamerina ny boky ihany.
Print, feno, ary asio an ME Drop-Off Tag amin'ny tsirairay entana tokony haverina.
Mamorona famantarana miaraka amin'ny anarana farany an'ny anaran'ny mpampianatra sy ny anaran'ny mpianatra amin'ny anaran'ny mpianatra. Ity misy Oh Car Tag ohatra. Apetraho eo amin'ny varavarankelin'ny fiara ny famantarana.
Raha tsy misy ny fanaovana pirinty, soraty mazava tsara ny fampahalalana rehetra amin'ny taratasy kely sy kasety ho an'ny entana tsirairay.
Asaivo nalamina tsara sy vonona hatolotra ho an'ny mpiasa ny fitaovana rehetra notondroina. Tsy misy kitapo, Mba miangavy re.
Rehefa tonga any amin'ny ME aho
Midira azafady avy amin'ny làlana Mason-Montgomery. Eo amin'ny faribolana eo alohan'ny trano no misy ny midina sy ny fanapahana. Aza miala amin'ny alàlan'ny fiaranao mandritra ity fotoana ity satria mila mitazona fiarovana ho an'ny rehetra mandritra ity hetsika ity izahay.
Ny mpiasa an-tsekoly dia hanangona ny entan'ny sekoly. Fianakaviana izay mindram-bola amin'ny Chromebook fananana an-tsekoly dia tokony hitandrina fa amin'ny fahavaratra dia mila mampiasa fitaovana indray ireo mpianatra rehefa manomboka miverina amin'ny fararano isika..
Ireo fianakaviana dia hahita sy hitondra ny famantarana miaraka amin'ny anaran'ny mpampianatra any an-tanindrazana. Sokafy ny entana sy harona feno fonosana mpianatra amina hidin-trano, efitrano fianarana, Specials, sns. dia hapetraka ao anatiny.
Fandaharam-potoan-dàlana ME Pick-up / Drop-Off
Alarobia, Mey 20
Alakamisy, Mey 21 – E Wing Homerooms
6:00 – 8:00 – (Morrow, Rivers, Borgerson, mihady, Baugh, Kroeger)
Zoma, Mey 22 – F Wing Homeroom
6:00 – 8:00 – (mampahatsiahy, Turnmire, Roussos, Butts, Feichtner, Franz)
Talata, Mey 26 – G Wing Homerooms
4:00 – 6:00 – (Antony, Hudspeth, Dicks, Traxler, Smith, Work)
6:00 – 8:00 – (Conway, Mijanòna, Brunsman, Gholz, Mahatsiravina, Matthews)
Alarobia, Mey 27 – H Wing Homeroom
Alakamisy, Mey 28 – I Wing Homerooms
4:00 – 6:00 – (Marotta, hatsembohana, Savage, Scalfaro, Castaneda, Homoelle)